Venezoela: Nanaovana Bemidina Ny Tranon’ny Mpampiasa Twitter Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2013 1:33 GMT
Notafihan’ireo manamboninahitry ny fitsikilovana Venezoelana ny tranon'ilay mpampiasa Twitter, Federico Medina Ravell ny Alahady 6 Janoary, izay araka ny voalaza dia ao ambadik'ilay kaonty @LucioQuincioC. Ahiahiana ho mampiely tsaho momba ny fahasalaman'Atoa Hugo Chávez io mpitoraka bilaogy kiritika io, izay rahalahy tsy iray kibo aminà mpanao gazety iray malaza avy amin'ny mpanohitra. Tsy niseho vahoaka mihitsy ny filoha Venezoelana hatramin'ny nisidinany nankany La Havana, Kiobà, hiatrika fandidiana homamiadana tamin'ny voalohandohan'ny Desambra, ka nampiely ny tsaho ny amin'ny hahafahany na tsia hanatrika ny lanonana fianianany amin'ny fe-potoam-piasàny vaovao kasaina hatao ny 10 Janoary 2013.
Araka ny voalazan'ny Noticias 24, voampanga “ho mihantsy fampihorohoroana avy amin'ny alalan'ireo vohikalan'ny tambajotra sosialy” i Medina, izay tsy hita tao an-tranony nandritra ilay bemidina. Mbola miasa ny kaonty @LucioQuincioC ary namoaka fanambarana fa tsy hiverina avy any Kioba i Chávez. Niely tany amin'ireo tambajotra sosialy ny honohono momba ny fiharatsian'ny toe-pahasalaman'Atoa Chavez momba ny fahasarotana mialoha ny fandidiana. Zavatra izay noraisin'ireo media mpandalim-baovao mpomba ny fitondrana ao Venezoela ho “adin'ny fampahalalam-baovao”.
“Adin'ny fampahalalam-baovao ity. Nahita izany adin'ny fampahalalam-baovao izany ianao nandritra ny revolisiona Bolivariana. Fitaran'ity ady ity fotsiny ihany ny Twitter sy ireo tambajotra sosialy,” hoy ny tsikeran'ny mpanao gazety iray tao amin'ny Cubadebate, vohikala mpomba an'i Chavez.